Zvikanganiso zvakasiyana paunenge uchifananidza OST Faira neShandura Server Mailbox.
musha Products DataNumen Exchange Recovery Kubvumirana Zvikanganiso
Zvikanganiso zvakasiyana paunenge uchifananidza OST Faira neShandura Server Mailbox
Unogona kuvhura maforodha mu offline fodhi (.ost) faira, asi haigone kuayananisa pamwe neSeva Yekutsinhana, kana kusangana nemishumo yekukanganisa yekuenzanisira inoratidzwa mudanda rekuenzanisira muDzidziso Yezvinhu Zvakabviswa.
Iko kukanganisa kunoreva yako OST faira rakaora, kana imwe kana dzakawanda email mameseji mu OST faira rakakuvadzwa uye maitiro ekuyananisa haakwanise kuzvigadzirisa.
Kana iri imwechete kana akati wandei zvisirizvo meseji dzeemail dzinokonzeresa iko kukanganisa, saka dzimwe nguva unogona kungodzima meseji idzi kugadzirisa iko kukanganisa. Zvakare Microsoft inopa iyo OST Kuvimbika Tarisa chishandiso izvo zvinogona kugadzirisa zvimwe zvidiki zvekuyananisa zvikanganiso futi. Nekudaro, ye most kesi, mhinduro yakanakisa yekudzivirira kurasikirwa kwedata uye zvimwe zvikanganiso zviri kushandisa DataNumen Exchange Recovery, seinotevera:
Vhara Microsoft Outlook uye chero chimwe chirongwa chingangowana iyo OST ikwidzwe.
kuwana OST faira inokanganisa iko kukanganisa. Iwe unogona kuona iyo faira nzvimbo zvichibva pane chivakwa chakaratidzwa muAptlook. Kana shandisa iyo kutsvaka shanda muWindows kutsvaga iyo OST ikwidzwe.
Dzosera iyo data rekunze muiyo OST ikwidzwe. The Exchange OST faira rine dhata risingabvumirwe, kusanganisira mameseji etsamba uye zvimwe zvese zvinhu, mubhokisi rako reExchange, izvo zvakakosha kwazvo kwauri. Kuti uwane uye ununure idzi dhata, unofanira shandisa DataNumen Exchange Recovery kuongorora iyo OST faira, dzoreredza iyo data mariri, uye chengeta ivo mune isina kukanganisa-isina Outlook PST faira kuitira kuti iwe ugone kuwana ese mameseji uye zvinhu zvine Outlook zviri nyore uye zvine mutsindo.
Dzorerazve zita kana kudzima iro rekutanga OST ikwidzwe.
Gadzirisa kukanganisa. Ita shuwa kuti masetingi eiyo Exchange email account muAptlook ndeechokwadi, uye Outlook inogona kubatana kune yako Exchange server zvinobudirira. Ipapo restart Outlook uye tumira / gamuchira maemail ako pane inoenderana Exchange mailbox, iyo ichaita kuti Outlook igadzire nyowani faira kunze kwefaira faira otomatiki uye iwiriranise data rayo neExchange mailbox. uye unofanira kuidzima uye ugadzire imwe nyowani, seinotevera:
Tumira iyo data yakadzoserwa padanho rechitatu. Mushure meako OST dambudziko refaira rakagadziriswa, chengeta iyo nyowani OST faira yeiyo Exchange mailbox yakavhurika, uye wozovhura iyo PST faira inogadzirwa nhanho 3 neAptlook. Sezvo iine data rese rakadzorerwa mune yako yekutanga OST faira, unogona kuteedzera zvinhu zvinodiwa kune yako nyowani OST faira sezvaunoda.